Kun Habeen iyo Habeen – Page 2 – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 35aad safarkii labaad ee Badmaaxii Sindibaad iyo Jaziiradii dheymanka aheyd.
January 21, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Waxay qeybtii hore noo mareysay sheekada markii aan xoogaa yara seexday balsi markii aan soo kacay aan is arkay anoo jaziirad cidlo ah dhex taagan kooxdii safarka wada aheyna iga tageen. Waan argagaxay […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 34aad safarkii labaad iyo Toggii dheymanka ahaa.
January 19, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada qeybtii hore waxay noo mareysay markii uu naaquudihii markabka igu yiri; “markabka waxaa saran oo ku haray badeeco uu ka dhintay wiil miskiin ah markabkana waxay saarantahay in mudo ah waxaana raadinayaa qoyskiisa si […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 33aad Safarkii koowaad ee Sindibaad iyo Jaziiradii dhaqaaqday.
January 17, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Aniga waxaan kamid ahaa kooxda jaziirada daawashada u aaday si aan quruxdeeda u arko waxaana aheyn kuwa wax cuna waxna caba iskana baashaalaa kuna raaxeysto jasiiradaas. Anagoo sidaas iska ah ayaan waxaan ka war […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYI HABEEN qeybtii 32aad oo xiiso leh sheekadii badmaaxii Sindibaad iyo todobadii safar.
January 16, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Waxay sheekada qeybtii hore inoo mareysay markii timo jarihii baqdaad uu dhahay hadii aan aniga ahaan laheyn wiilkaan wuu dhiman lahaa wuxuuna ka hadlay in uu ku tilmaamay inuu ahaa mid war badan […]
Maxaa kusoo kordhay sheekadii KUN HABEEN IYO HABEEN?
January 15, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Kadib codeyn iyo latashi aan sameynay kadib markii sheekada timo jarihii baqdaad ee ku dhex jirtay sheekadii ninkii weershaha ahaa ee la dilay ay noqotay mid aad u dheer wax nuxur ahna aan laheyn isla […]
Ogeysiis muhiim ah oo ku saabsan sheekadii KUN HABEEN IYO HABEEN.
Sheekada Kun habeen iyo habeen waxay inoo mareysay qeybtii 32aad taasoo caawo lagu wado inaan soo gudbino lkn cilad yar ayaa jirto taasoo aan jeclaaday inaan idinla kaashado maadaama adinka akhristayaashii aad tihiin. Cilada ayaa […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 31aad oo caawo xiiso gaar ah leh.
January 14, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Markuu timo jarihii saas I dhahay ayaan dareemay in madaxa I qarxi rabo war badnidiisa owgeed markaas ayaan wiilkii ii keenay ku dhahay war ninkaan hal dirham sii oo iga wad inaan sii arko ma […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 30aad oo caawo xiiso gaar ah leh.
January 13, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Maalintii xigta markii la gaaray ayay duqdii ii timid ayadoo wajigeeda nooc kale yahay waxayna igu dhahday “wiiloow waxba ha I warsan waayo aniga markaan gabadhii u tagay hadalkaagiina u sheegay way igu xanaaqday […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 29aad oo caawo xiiso gaar ah leh.
January 11, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Waxay qeybtii hore sheekada inoo mareysay markii yahuudkii uu yiri; Qalabkeygii ayaan soo qaatay waxaana soo aaday gurigii balse waxaan u imid wiil aad u qurux badan oo saran sariir aad moodid iney dahab […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 28aad oo xiiso leh.
January 10, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Isbuuc ayaa kasoo wareegatay gabadhiina ma hayo waxaana ii yimid ganacsatadii oo lacagtoodii raadinaayo waxaanse usheegay iney ilaa isbuuc kale I sugaan. Isbuucii xigay nasiib wanaag wey imaaday iyadoo oo lacagtii sida markii aan lacagtii […]